Vaovao - Ahoana no hanaovana fitazomana fehin-tànana marani-tsaina?
1. Ataovy madio hatrany ny fitaovana marani-tsaina. Diovy tsy tapaka ny tananao sy ny fehin-tànanao maranitra, indrindra aorian'ny fampihetseham-batana, hatsembohana, na fifandraisan'ny hoditra amin'ireo zavatra toy ny savony na detergent. Ireo akora ireo dia mety miraikitra amin'ny atin'ny peratra; Aza mampiasa detergent ao an-trano hanadiovana ny bracelet. Mampiasà detergent tsy misy savony, hosasana tsara ary maina amin'ny servieta malefaka. Ho an'ireo teboka na tasy tsy mora esorina, kosohy amin'ny borosy nify malefaka sy mando ary araho ireo dingana etsy ambony.
2. Ataovy maina foana. Na dia tsy tantera-drano aza ny fitaovana marani-tsaina, dia manimba ny hoditrao ny fanaovana fehin-tànana lena mandritra ny fotoana maharitra; Raha lena ny fehin-tànanao, toy ny rehefa avy tsemboka na avy nandro dia sasao sy hoamaina alohan'ny hamerenana azy. Alao antoka fa maina ny hodinao alohan'ny hametrahanao ny fehin-tànana.
3. Atsaharo ny tananao. Hamarino tsara fa tsy tery ny bracelet. Hamarino tsara fa tsy tery loatra ireo fehin-tànana. Soso-kevitra ny hamela toerana eo anelanelan'ny tarika sy ny hato-tanana mba hikorisa miverina sy miverina ny rantsan-tànana kely. Raha mampiasa azy io ianao mba hahitana ny famakiana fitepon'ny fo marina marina azo atao, dia azonao atao ny manamafy ny fehin-tànana rehefa manao fanatanjahan-tena. Raha izany dia tadidio ny manitsy ny tery aorian'ny fampihetseham-batanao. Ny fikorontanana sy ny fanandevozana mandritra ny fotoana maharitra dia mety hanelingelina ny hoditrao, ka esory mandritra ny adiny iray ny fehin-tànana aorian'ny fitafiana maharitra.